Igumbi #2: Indlu Yezivakashi Eduze Nolwandle (5min) - I-Airbnb
Igumbi #2: Indlu Yezivakashi Eduze Nolwandle (5min)
Tela, Atlántida Department, i-Honduras
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Sofia
Itholakala kwenye yezindawo ezingcono kakhulu zedolobha, indlu yethu inikeza izivakashi zethu indawo enhle yesabelomali ukuze zijabulele iholide lazo eTela. Inokufinyelela kalula olwandle (imizuzu emi-5)*, iLancetilla (imizuzu emi-5)*, iDowntown Tela (imizuzu eyi-10)*. Futhi sinikezela ngokuqashwa kwezimoto ngo-$35 ngosuku ezivakashini zethu.
*Ukushayela kukalwe ibanga.
Ngingakujabulela uma uke wazinika isikhashana ukufunda le mithetho yasekhaya ekuqaleni kokuhlala kwakho futhi uyilandele. Uma kukhona okungacacile, ngicela ungithinte ukuze ngikwazi ukuchaza kabanzi ukugwema noma yikuphi ukungezwani.
Khumbula ukuthi uqasha indawo okwabelwana ngayo, HHAYI indlu yonke. Ngicela uyiphathe ngenhlonipho njengoba ubuzokwenza owakho umuzi. Azikho izihambeli ezivunyelwe ngaphandle kwalowo owenza ukubhuka.
Sikucela ukuthi ungalungiseli kabusha ifenisha yethu futhi uhlanze ikhishi ngemva kokuyisebenzisa.
Qiniseka ukuthi ucisha izibani, isiphephetha-moya, nanoma yiziphi izinto zikagesi lapho uphuma endlini. Ungakhohlwa ukuvala amafasitela bese uvala umnyango.
Ukubhema akuvunyelwe ngaphakathi ekhaya, kodwa ungabhema ezindaweni ezingaphandle.
I-Tela iyindawo eshisayo futhi omiyane abakwazi ukuyekethisa. Sikweluleka ukuthi uphathe umuthi oxosha omiyane.
Sinikeza izivakashi zethu izihlalo zasolwandle ngaphandle kwezindleko ezengeziwe, kodwa uma zitholwa zilimele sizokhokhisa imali engu-$20/ngesihlalo.
Sine-grill etholakalela izivakashi zethu. Nokho sizokhokhisa enye imali engu-$5 yokuhlanza/igesi.
Indawo esihlala kuyo ibalulekile kithi, futhi izakhamuzi eziningi zihlala lapha isikhathi esigcwele. Sicela uhloniphe umphakathi futhi ugweme ukwenza umsindo omkhulu phakathi kuka-11 ebusuku no-8 ekuseni.
Siyabonga kusengaphambili ngokuba isivakashi esihle!
4.78 · 27 okushiwo abanye
Indawo yethu inezitolo ezinkulu, amagalaji kaphethiloli amaningi, izindawo zokudlela kanye nesibhedlela. Inokufinyelela kalula edolobheni nakuthelawayeka i-CA-13.
- I-Supermarket Despensa Familiar itholakala endaweni eyodwa futhi lapho ungathola ukudla, iziphuzo, nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu.
- Igalaji likaphethiloli le-UNO liqhele ngamabhulokhi amabili futhi linikeza ukudla okulula, iziphuzo, nokubala nge-ATM. Igalaji likaphethiloli livula amahora angu-24 ngoLwezihlanu nangeMigqibelo.
- I-Lancetilla Medical Center itholakala kuthelawayeka i-CA-13 futhi iqhele ngemizuzu emi-2. Inekhemisi futhi ibala ngokunakwa amahora angama-24.
Passionate about the arts — cinema, photography & painting. Big fan of live music, traveling and meeting new people :)
I-Atención inikezela ngohlelo lokusebenza lwe-traves de Airbnb, i-imeyili noma ucingo. Sihlala sitholakala ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb, i-imeyili noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tela namaphethelo